ဤလှပသော စကားလုံး လေးသည်ကျွန်မဖန်တီးထားသောစကားလုံးမဟုတ်ပါ။ ကွယ်လွန် ခဲ့ပြီ ဖြစ်သော မျက်စိပါရဂူ စာရေးဆရာ ဒေါက်တာရဲနိုင် မဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်တွင် မျှဝေရေးသားခဲ့သော ဝတ္ထုခေါင်းစဉ် စကားလုံး အဆန်းလေးဖြစ်၍ အတွေး အခေါ်လေးကိုပါမှတ်မိနေဖြစ်ပါသည်။ ဟိုတနေ့ကတော့ ကျွန်မ၏အတွေးကို သိနေသည့်အလား ဒေါက်တာလွမ်းဝေ(အလှတရား)က သူ၏ဆရာဒေါက်တာရဲနိုင် သဘောကောင်းကြောင်း အစဖေါ်ပြောကြားဖြစ်ခဲ့သေးသည်။
ဆရာသည် တာဝန်တစ်ခုဖြင့် စင်္ကပူ နိုင်ငံသို့ ရောက် ခဲ့ပုံရပါသည်။အီကွေတာ ရပ်ဝန်းဒေသဖြစ်သော စင်္ကပူ ၏ ထာဝစဉ် ပူနွေး စွတ်စိုသော ရာသီဥတု ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံ၌--- တစ်နှစ်တွင် သည် တစ်လ၊တစ်လတွင် တစ်ရက် တည်း--ရယ်လို့ တင်စားတန်ဘိုးထားသော ပန်းပိတောက်တို့သည် ပေါပေါသောသော လှိုင်ဘော လယ် အောင်ပွင့် နေတတ်ပါသည်။သည်ဖြစ်စဉ်ကိုမြင်တွေ့ ရသလို--အကြောင်းကြောင်း သောအ ကြောင်း တွေအကြောင်းပြုပြီး ဆရာဝန်က ဓာတ်ခွဲခန်းလက်ထောက်လုပ်ရသလို၊ ကျောင်းဆရာမ ကလည်း Casher ဝင်လုပ်ရတာမျိုး ကို အီကွေတာပိတောက်ပွင့် များလို့ဆရာက တင်စားခဲ့ဘူး ပါသည်။
ကျွန်မသည် ဝေဖန် ဆန်းစစ်နိုင်သော Social Scienceပညာရှင် လည်းမဟုတ်ပါသဖြင့်…မည်သို့မှ မှတ်ချက် မပေး နိုင်ပါ။သို့သော်လည်း ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်နေ သည့်အတွက် အီကွေတာ ပိတောက် များ ဘဝ လမ်းကြောင်းပြောင်းနိုင်ကြောင်း ကိုတော့ စိတ်ဝင်တစား ဆွေးနွေး ချင်မိပါသည်။ ကျွန်မသည် အ သက် တော်တော်လေးကြီးမှ ပညာသင်ဆု များရရှိကာ ဘွဲ့လွန်ပညာရေးကို သင်ယူခွင့်ရခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မနှင့်အသက်တန်းတူ များမရှိ နိုင်လောက်ဘူး လို့ထင်ပေမဲ့ အရွယ်တူ ကျောင်းပြန်တက်သော သူများကြုံတွေ့ရပါသည်..။
သူတို့ကတော့ ဘွဲ့ရ၊ မိသားစုအတွက် နိုင်ငံခြားတွင်အီကွေတာ ပိတောက် လုပ်၍ ငွေရှာခဲ့ ကြသည်။ငွေစုမိတော့ အ်ိမ်ထောင်ပြု ငွေထပ်ရှာ ရမဲ့ အချိန် မှာ တစ်ခါက အီကွေတာ ပိတောက်လို အပင်ပန်းမခံ ချင်တော့ လို့ ဘွဲ့လွန်ပညာရေး ကို ပြန်သင်ယူပါသည် တဲ့။ ကျွန်မ က ပညာ သင်ဆု ဖြင့်ကျောင်းတက်သည်။သူတို့က စုဆောင်းထားသည် များကို ထုခွဲ၍ ကျောင်းပြန် တက်ကြသည်။ဘဏ္ဍာရေးရလဒ် ကတော့ တူတူပဲလို့ ဆိုကြပါသည်။
ကျွန်မ၏ ထိုထိုသူငယ်ချင်းများ၏ ခံစားချက်နှင့်ဘဝအမြင် အခြေပြုလို့ ကို မျှဝေချင်ပါသည်။ ဤ ဘလော့ဂါ လောကထဲရောက်တော့ အီကွေတာပိတောက် လုပ်၍ မိဘလုပ်ကျွေးနေသူများ၊အရည် အသွေးရှိ သောလူငယ်၊လူရွယ်လေးများစွာရှိနေကြတာ ကျွန်မတွေ့ရပါသည်။ ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ စွာရှိကြပါလိမ့်မည်..။နာမကျန်းသည့် မိခင်ကြီးအတွက်၊ ကျောင်းတက်နေသော မောင်ညီမများအတွက် ၊မိသားစုရဲ့စီးပွားရေး ပြဿနာ များအတွက် ပေးဆပ်နေကြတာ လည်း များစွာ ရှိနေပါလိမ့် မည်။
ထိုအီကွေတာပိတောက်ပွင့်ကလေးများကို ရှားပါး အဘိုးတန်စေလိုလှပါသည်။ဘွဲ့လွန်ပညာရေးကို လက်လှမ်း မမီနိုင်သော ပင်မြင့်စံ၊ပန်းတစ်ပွင့် ရယ်လို့ မယူဆစေလိုပါ..။ ကျွန်မအတွေ့အကြုံ အရ တော့ မြန်မာ များသည် မညံ့ကြပါ။အရှေ့တောင်အာရှတွင် အိန္ဒိယပြီးလျင် အင်္ဂလိပ်စာ အတော် ဆုံး ရယ်လို့ သတ်မှတ်ခံရသည်။
အခုဥရောပတွင်ကျောင်းတက်ပြန်တော့လည်း Italian English, Greece English, South American English,East Europe English,African English, Scandinavian English များကို ကြုံတွေ့ဘူးပါသည်။သူများ အတင်းလည်း မပြောတတ်ပါမပြောချင်ပါ။မြန်မာတွေတော်ပါသည်လို့သာ ကိုယ့်ငါးချဉ်ကိုယ်ချဉ် လိုက်ပါရစေ။
အခုလို ဘလော့တစ်ခု ဖန်တီးနိုင်သည်အထိ ကွန်ပျူတာ ကိုအသုံးပြု တတ်လျှင် Power Point Presentation,Thesis ,Assignment, Term Paper များကိုလည်းအခက်အခဲမရှိ ဆောင်ရွက် နိုင်ကြပါလိမ့်မည်ဆိုတာကျွန်မ ယုံကြည်အာမခံပါသည်။
မိသားစု အတွက် တစုံ တစ်ခုသော အတိုင်းအတာအထိ တာဝန် ကျေပြွန်ပြီးလျှုင်တော့ အီကွေတာ ပိတောက်ဘဝ မှ အီကွေတာမှာ ဖန်လုံအိမ်ဖြင့်တန်ဘိုးထားစိုက်ပျိုးရသော Tulips ပန်းလေးများ အဖြစ် ကျန်ရှိသော ဘဝရဲ့ နေ့စွဲများကို ဖြတ်သန်းသွားစေ လိုသည်မှာကျွန်မ ၏ စေတနာအမှန်ပါ။
ဆွဲဆောင်သိမ်းသွင်းရတာ တော်တော် လေးတော့ ရှည်သွားပါပြီ..။ ကျောင်းပြန်တက်လိုသူများ ကံကောင်းလျှင် Scholarship များလည်းရနိုင်ကြပါမည်။ အီကွေတာ ပိတောက်လုပ်၍ ရသောငွေကို မိဘဆွေမျိုးများထောက်ပံ့၊ လိုအပ်သောနေရာများကို လှူဒါန်းကြတာ။ ပြည်ပရောက်မှ ဘာသာရေးလုပ်ငန်းများကို ပိုလုပ်ကြ၊ သာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ် များကို လှူဒါန်းကြ ဖြင့်ကုသိုလ် ထုထည် ကြီးမား နေသည်ကို ကိုးစားရဲဝံ့နိုင် ပါသည်။
ပထမဦးစွာ ရရှိထားသော (Education Background, Working Experience, Hobby)တို့ကိုဖော်ပြလျက် ဤEmail(thitsaralin@gmail.com)သို့">thitsaralin@gmail.com)သို့တိုင်ပင် ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ အောက်ပါ ပညာရှင်များ ထံမှ အကြံဉာဏ်တောင်းခံ ဖြေကြားကူညီ ကာပညာရေးဝန်ဆောင်မှု ဒါနပြုပါရစေ..။
၁။ဦးသောင်းထွဋ် (Outstanding Award Recipient,ITE, Singapore)
၂။ဒေါက်တာထွန်းလင်းမိုး (Cornell University, USA)
၃။ဒေါက်တာနီတာနွယ် (Kansai University, Japan)
၃။ဒေါက်တာအေးအေးခင် (University Putra Malaysia,UPM)
၄။ဒေါက်တာမသန်းခင် (Shinawatra University, Bangkok, Thailand)
၅။ဒေါ်စန္ဒာသန့် (Manager-Mekong Institute,Thailand)
၆။မလွင်လွင်အောင် (AIT GOLD MEDALIST-2005)
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 8:59 PM
I amaPh.D student studying in Thailand. And alsoastaff of Yezin Agricultural University. Dr. Aye Aye Khin and Ma Ma Lwin Lwin Aung are my seniors. I am so interesting your idea for advising and supporting students who wanna to continue their study. I knew how diffcult to get scholar for studying abroad. I tried for5years to get scholarship. Now, my juniors wanna to study and ask me how to apply scholarship. May I refer your gmail address to them.